Kutholakale isidumbu sinenhlamvu ebusuweni eDududu | News24
Kutholakale isidumbu sinenhlamvu ebusuweni eDududu
Johannesburg - Abasolwa abathathu kulindeleke bavele eNkantolo yeMantshi yaseScottburgh, KwaZulu-Natal, ngoLwesihlanu ngecala lokubulala owesifazane okukholakala ukuthi uneminyaka elinganiselwa ko-30 ubudala.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Vincent Pandarum uthe owesifazane ongakahlonzwa watholakala ebulewe ezimobeni ngaseMandawe, enimngizimu yeTheku, ngoLwesithathu.
Isidumbu sakhe satholakala sinenxeba lenhlamvu phakathi kwezinhlamvu zamehlo, kubika iSouth Coast Herald.
Funda nalolu daba: Umndeni ukhiphe umehlokaboni ngogogo obulewe
“Imininingwane etholakele iveze ukuthi umufi ubengomunye wabesifazane ababili ababonakale ethaveni ePark Rynie behamba nabesilisa ababili ebusuku,” kusho uPandarum.
Uthe uphenyo luholele amaphoyisa emzini waseThafeni Ward, eDududu, nokuyilapho kuboshwe khona umsolwa otholakale nesibhamu se-9mm.
Uthe ngesikhathi kuseshwa endlini kube sekutholakala umsolwa wesibili kanye nowesifazane okuthiwa babenomufi ethaveni.